4 क्यामेरा लेक Tahoe चित्रण गर्न १,००० बर्षका लागि क्रिएटिव अनलाइन
जोनाथन कीट्सले आफैलाई एक उपलब्धि सेट गरेका छन् Mil मिलेनियम क्यामेराको साथ लामो प्रदर्शनी फोटोग्राफी प्रयोग गर्दा। उनको लक्ष्य लेक टाहो बेसिनमा कसरी समय बित्छ भनेर कागजात गर्न १,००० वर्षको शटर गति प्रयोग गर्नु हो।
मिलेनियम क्यामेरा के हो भनेर बुझ्नको लागि, हामीसँग वर्ष २०१ to मा जानुहोस् जब Keats यो परिचय यो २ copper क्यारेट प्लेटको माध्यमबाट प्वाल पारिएको एउटा साधारण तांबेको छेपछाडि उपकरण हो।
यो आउँदो १,००० वर्षको बीचमा हुनेछ जब मिलेनियम क्यामेरा, त्यस पछि used प्रयोग हुनेछ, जसले वातावरणमा यसको उद्देश्यहरू सेट गर्दछ र यसैले वातावरणको सबै परिवर्तनहरू कागजात गर्दछ।
त्यहाँ चार बुँदाहरू हुनेछ मिलेनियम क्यामेरा स्थित हुनेछ परम्परागत परिदृश्य को तस्वीर लिन। यी क्यामेराको नजिकै एउटा पट्टिका हुनेछ जसले तिनीहरूको प्रोजेक्टको उद्देश्य बताउँछ टाहो टाइमस्केप।
मुख्य विचार भनेको कसरी हेर्नु हो वातावरण समयसँगै परिवर्तन हुँदैछ १,००० सम्म पुग्ने बर्ष पछि। यो 1.000०१ in मा हुनेछ जब उनको काम प्रदर्शित हुन्छ, किनकि किट्स आफैले फोटोग्राफीको लागि ठूलो चासोको यो प्रोजेक्टको घोषणामा भनेका छन र ग्राफिक कागजात छ जुन यति धेरै वर्षहरुमा साक्षी दिइन्छ।
हामी कुनै पनि समान परियोजना सम्झन सक्दैनौं विचारहरु एक विशाल समय सीमा मा अनुमान गरीएको छ र जसमा सबै प्रकारका घटनाहरू क्याप्चर र रेकर्ड गर्न सकिन्छ; विशेष गरी प्रकृति र समय बित्ताको साथ सम्बन्धित।
जोनाथन कीट्स एक प्रयोगात्मक दार्शनिक हुन् जुन उत्तर दिन चाहन्छ कि आउने वर्षहरुमा पृथ्वी कसरी परिवर्तन हुन्छ। एक क्षणको लागि अवस्थित प्रश्न जुनमा हामी अत्यधिक उपभोक्तावादको लागि ग्रहलाई खान्छौं र यसको कुनै अन्त छैन जस्तो देखिन्छ; एक विचार र आलोचना कि जर्मन कलाकार सर्जियो इन्ग्राभाले सlects्कलन गर्दछ.
La Keats वेबसाइट.
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » कलाकारहरू » Mil मिलेनियम क्यामेरा झील ताहोको फोटोहरूका लागि १,००० बर्ष